Vaccination mot covid-19 för dig som är under 18 i Sörmland - somaliska
Tallaalka ka hortagga cudurka covid-19 ee loogu talagalay dad ka yar 18 sano ee Sörmland.
Vaccination mot covid-19 för dig som är under 18 i Sörmland - somaliskaThe content concerns Sörmland
Gobolka Sörmland waxa tallaalka ka hortagga cudurka covid-19 la siinayaa qofka dhashay 2005 iyo usbuucii 32aad ee ka horeeyey. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan sida adiga laguu tallaalayo.
Tallaalka ka hor
Meel kasta oo adiga lagaa tallaalo waa inaad keentaa warqadda caddaynta caafimaadkaaga oo la soo buuxiyey iyo foom oggolaansho ah, oo uu ugu yaraan mid ka mid ah labada qof ee adiga kaa mas’uulka ahi ay saxeexeen. .
Haddii aanad adiga guriga laguugu soo dirin warqadda caddaynta caafimaadka iyo foomka oggolaanshaha, waaad ka soo dejisan kartaa:
Foomka oggolaanshahat (pdf)
Warqadda caddaynta caafimaadka (pdf)
Goorma iyo sidee ayaad adigu isu tallaali kartaa?
Iyada oo ay ku kala xiran tahay xaaladaha degmo kasta, xalalka ayaa u muuqda siyaabo kala duwan. Degmooyinka qaar balamaha waa la sii qabsadaa halka kuwa kalena ay dadku iska tagaan (drop in). Tirada dadka la siin karo tallaalka ay dadku balan la’aan iska tegeyaan way xadidan tahay. Waad ku mahadsantahay fahamkaaga!
Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan goorta iyo sida aad isaga tallaali karto luqada iswiidhishka
Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan goorta iyo sida aad isaga tallaali karto luqada ingiriiska
Waxaad sidoo kale wici kartaa telefoonkayaga ballansashada ee 016-10 40 44 si aad caawimaad ugu hesho luqadda carabi, finnishka, ingiriiska ama soomaaliga ah si aad uga hesho fursad tallaal goobta aad deggan tahay.
Tallaalkee la isticmaalayaa?
Waxaanu isticmaali doonaa tallaalka ama tallaallada la oggol yahay in lagu tallaalo dadka ka yar 18 sano.
Marka tallaalka koowaad lagu siiyo waxaad helidoontaa sida aad u ballansanayso tallaalka labaad.